Rugby: hangotraka ny fihaonan’ny Cosfa sy ny CNaPS Rugby | NewsMada
Rugby: hangotraka ny fihaonan’ny Cosfa sy ny CNaPS Rugby
Hitohy, ny asabotsy izao, ny fiadiana ny tompondaka “Elite régionale”, taona 2018, ao anatin’ny lalao manasa-dalana. Hampisongadina ity lalao ity ihany koa ny fisian’ny lalao fitsapana eo amin’ny Cosfa sy ny Cnaps Rugby, eo ihany koa ny “Top Fédérale Féminine”.
Hanamarika ity faran’ny herinandro ity ilay lalao fitsapana eo amin’ny Cosfa sy ny CNaPS, tontosaina mialoha ny lalao manasa-dalana eo amin’ny “Elite régionale”. Natao indrindra ity lalao ity ho fanomanantena ho an’ny Cosfa, handeha hiatrika ny fifaninanana Aroi atsy ho atsy. Etsy ankilany, vonon-kanohitra ny CNaPS Sport, efa tsara omana ihany koa. Hiady, araka izany, ity fihaonana ity, hampitsanga-mitoetra ny rehetra ho tonga etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin’io asabotsy 16 febroary io.
Mialoha izany, hisantara ny manasa-dalana amin’ilay fiadiana ny tompondaka “Elite régionale”. Amin’ny 12 ora ny fifanandrinan’ny Mang’art avy etsy Manjakaray sy ny Hiza17 avy eny Angarangarana. Raha tsahivina, nibata ny fandresena nanoloana ny RFA tamin’ny isa 22 no ho 13 ny Mang’art, nandritra ny ampafefa-dalana, raha toa ka nandavo ny Nanoowah tamin’ny isa 22 no ho 16 kosa ny Hiza 17.
Isan’ny fihaonana tena andrasan’ny maro aorian’io, izany hoe, amin’ny 1 ora sy 30mn, ny lalao manasa-dalana faharoa, hifandonan’i Afa avy etsy Ankazomanga sy ny FTBA avy etsy Andohatapenaka. Lalao misokatra tanteraka izy ity ka ho hita eo izay mivoaka mpandresy. Tsy vahiny amin’ity taranja ity izany FTBA izany, nahavita dingana lehibe izy ireo matoa tonga amin’izao. Toraka izany koa, etsy ankilany, ny Afa Ankazomanga izay niaraha-nahita ny zava-bitany sy ny fahaiza-manaony nandritra iny dingan’ny ampahefa-dalana iny.
Ankoatra ireo lalao ireo, hampiavaka ny amin’ny asabotsy io ihany koa ny “Top fédérale feminine” hifandonan’ny FTM Manjakaray sy ny FTFA Antohomadinika.